ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »6ရက်စွဲရေကန်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရခင်သင့်ကိုယ်သင်မေးကြည့်ပါရန် Key ကိုမေးခွန်းများ
တစ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စျေးဝယ်ခရီးစဉ်များအတွက်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်သွားကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ. သင်လိုအပ်တဲ့အရာတွေရဲ့စာရင်းကိုထုတ်လုပ်ဖို့ကိုလျစ်လျူရှု, ဘတ်ဂျက်, သို့မဟုတ်တောင်မှမုန့်ညက်စိတ်ကူးများ.
ရွေးချယ်မှုများ၏ခင်းကျင်းစိတ်ကို boggling များမှာ. သင်ဘယ်မှာပထမဦးဆုံးကြည့်ရှုရန်မသိရပါဘူး. သင်သည်အဘယ်သူမျှမ system ကို ... သင့်ရူးမှ .no နည်းလမ်းရှိသည်.
ငြိမ်ဝပ်စွာ နေ. သင်တို့အချိန်ဖြုန်းလိမ့်မယ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချပါ, အချို့သောအများကြီးလိုအပ်နေ "စတော့ရှယ်ယာတက်" ပစ္စည်းကောက်ရန်မေ့လျော့, overspend, လတစ်လကျော်မီနှင့်တစ်ဦးဒုတိယအကြိမ်ခရီးစဉ်အောင်တက်အဆုံးသတ်.
ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ဖက်အတွက် "ဈေးကွက်" တွင်ရောက်နေလျှင်ကမောက်ကမဖြစ်ခြင်းနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ၏အလားတူသဘောမျိုးအောင်နိုင်.
ကျွန်တော်တို့အများစုကကျနော်တို့ကိုရှာနေချင်တာလဲဆိုတာမရှိအစစ်အမှန်သဘောရှိသည်, ဘယ်မှာကြည့်ရှုရန်, သို့မဟုတ်အသိပေးတဲ့ရွေးချယ်မှုအောင်ရောက်ရှိရန်မည်မျှ.
ဆိုကရေးတီးတစ်ချိန်ကလိမ္မာစွာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း: "ဒီ unexamined အသက်ရှင်ရကျိုးနပ်မဖြစ်သည်။ "
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်အတိုင်းဤအတူ, ဒီမှာပါ6သင်သောသူအပေါင်းတို့သည်အရေးကြီးဆုံးပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်စတင်မှာအရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးသင့်ပါတယ်အလွန်အရေးပါမေးခွန်းများကို.
1. ငါ့လက်ရှိချိန်းတွေ့ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲ? ငါအနာဂတ်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရှာနေပါတယ်? ပေါ့ပေါ့တန်တန်ချိန်းတွေ့? ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး? တစ်ဦးကသကြားဓာတ်ဖေဖေ? အဆိုပါ ပိုမို. ရှင်းလင်းသင်မည်, ပိုကောင်းသင်အလားအလာမိတ်ဖက်ရန်ဤပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်မျှတတဲ့ကသူတို့ကိုအားဖြစ်လိမ့်မည်. သင်သည်ထိုသူတို့ကတို့အကြားမရင်တောင်, ကနဦးစိစစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၌အချိန်နှင့်မငြိမ်မသက်ကယ်ဖို့ကူညီနိုင်သည်. မဟာဗျူဟာကိုစဉ်းစားပါ!
2. ငါ့သဘောတူညီချက် Breaker ဘာတွေလဲ? တစ်နည်းပြောရရင်တော့, အဘယ်သို့သောစရိုက်များ, အလေ့အကျင့်, သို့မဟုတ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကိစ္စရပ်သင်အပေးအယူမှချင်ဘူး. ဥပမာအားဖြင့်, လူတချို့ကလေးတွေနှင့်အတူအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ကြမည်မဟုတ်. တချို့အမျိုးသမီးတွေရက်စွဲရာဇဝတ်သားတစ်ဦးစံချိန်နှင့်အတူယောက်ျားတွေမသွားဘူး. နှင့်အခြားသူများများအတွက်, အသက်အရွယ်တစ်ခုလုံးညီမျှခြင်းအတွက်အချက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်. အပေးအယူအားလုံးအောင်မြင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရန်အရေးကြီးသော်လည်း, ငါတို့သည်ငါတို့၏အမာခံတန်ဖိုးများသို့မဟုတ်ကျွန်တော်နေသောများ၏အနှစ်သာရအလျှော့ပေးလိုက်လျောဘယ်တော့မှမပေးသင့်,့cutie နှင့်အတူတက်ဒွန်တွဲရကြမည်.
3. ငါသည်ငါ၏နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးမှအဘယ်အရာကိုသင်ယူခဲ့? အလွန်ကြီးစွာသောအမှန်တရားကိုအသုံးအနှုန်းကိုရှိတယ်, "အတိတ်ထဲကနေလေ့လာသင်ယူရန်ပျက်ကွက်သူများသည်ကပြန်လုပ်ပါရန်ပို့ဆောင်နေတယ်။ " ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် hindsight ၌သင်တို့ယခု "လူရမ်းကား" သင်တို့၏အရာမဟုတ်ကြောင်းကိုအသိအမှတ်မပြု. သို့မဟုတ်သင်ပိုကောင်းသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်လိုအပ်ကြောင်း. သင်ခန်းစာတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီသည်မေတ္တာကိုကွဲပြားခြားနား "ကျောင်းသား။ " စစ်မှန်သောဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အထပ်ထပ်ပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်မဆိုအဖျက်သို့မဟုတ် disserving ချိန်းတွေ့မှုပုံစံများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဒီမှာစိတ်ကူးရယူပါ?
4. ငါ့ရှာဖွေရေးလက်တွေ့ကျကျမျှော်လင့်ချက်များကအုပ်ချုပ်သည်? မြင့်မြတ်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုတစ်ခုလြျှောစာရင်းထားရှိခြင်းသည်သာထိုလုပ်ငန်းစဉ်ပျက်ပြားခြင်းနှင့်ရှည်အောင်ဦးမည်. ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သောအမျိုးသမီးခြောက်ပေအရပ်ရှည်ရှည်သူသည်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရှာဖွေဆန္ဒပြင်းပြ, ခြောက်လကိန်းဂဏန်းများအောင်, အဘယ်သူသည်ကိုလက်ထပ်ဖူး, ပြောတတ်၏3ဘာသာစကားများ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ချစ်သောသူ. အဲဒါဖြစ်နိုင်လား? သေချာတာပေါ့.
ဖွယ်ရှိ? အကြှနျုပျသညျ celebrity အချစ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုခြင်းအဖြစ်အကြောင်းသလောက်, Keanu Reeves. သဲလွန်စရယူပါ.
5. ဒီငါ့ခြေကိုစိုစွတ်သောရရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်? ကျွန်မဟောင်းတစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးကိုအစားထိုးဖို့ပြန်ခုန်ထွက်ရှာနေငါ? ငါဆက်ဆံရေးအတွက်တန်းတူမိတ်ဖက်ဖြစ်ဖို့အတွက်မြှုပ်နှံထားရန်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ရှိသည် Do? အတိတ်ဒဏ်ရာများမှအနာကိုငြိမ်းစေပြီဟု? ဤစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်ကြ၏. ထိုအကသင်တစ်ယောက်တည်းသာအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်သိ.
6. ငါ့ဂိမ်းအစီအစဉ်ကိုဆိုတာဘာလဲ? ငါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုများအတွက် sign up ကိုမူမည်? ငါ့အတက်ကို fix လုပ်ဖို့ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေကိုမေးပါ? ငါ့ဗီရို "ရက်စွဲအဆင်သင့်ဖြစ်?"ငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့လိုအပ်သလား? ကျနော်နှစ်ကြိမ်တစ်ပတ်လျှင်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တလချိန်းတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်? အားလုံးအလေးအနက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်ဝသကဲ့သို့, ဂိမ်းအစီအစဉ်ကိုသံလိုက်အိမ်မြှောင်အဖြစ်အစေခံရန်အရပ်ဌာန၌ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်, ကျူးလွန်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်, နှင့်သင်တန်းတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်.
"ကိုယ်တော်၏ဥစ္စာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စေရန်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ " သင်သည်လက်ျာအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်တကွရှာဖွေခြင်းနှင်ပိုပြီးလိုက်ဖက်သောဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးတဲ့အလေးသာမှုတိုးမြှင့်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်, ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်သိနေရ.